ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3သင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သိထားသင့်သောအရာတို့ကို
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 20 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အမျိုးသမီးများစွာကဆက်ဆံရေးကိုမှကြွလာသောအခါယနေ့၏လူကတိကဝတ်များ၏အားကြီးသောကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောပြသသောဟုသဘောတူကြမည်. စိတ်ပညာရှင်တူညီတဲ့စိတ်သဘောထားဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူသတိထားမိခဲ့ကြပြီး, ဒီကြောက်စိတ်အမြစ်များအကြောင်းကိုသင်တို့အားခပ်သိမ်းသောရှင်းပြပေးလိမ့်မည်သင်သည်သူပြောလိမ့်မည်ဟု – စိုးရိမ်မှုများသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးရန်, သူတို့ရဲ့ privacy နဲ့လွတ်လပ်ရေးကို. သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကျူးလွန်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သောရိုက်ချက်အောက်မှာရှိတယ်? အကယ်. သင့်ရဲ့ယောက်ျား၏စိတ်နှလုံးကိုဖို့အဓိကသော့ချက်ရှိသည်နှင့်သင့်အပြုအမူဆက်ဆံရေးတွင်တည်းခိုသို့မဟုတ်နောက်ထပ်အဆင့်အထိတာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာအလွန်ကြီးစွာသောထိခိုက်မှုရှိသည်ဟုသင်သိသင့်သည်. ကတိသစ္စာကိုလူတသို့ပြောရကြလနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး, သင်ဟာသင်သိရ. သင်သည်လက်ျာအချိန်ကိုက်ကောက်မယ်ဆိုရင်, သူ့ကိုသင်ကျူးလွန်လိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်သမျှအထူးစိတ်လှုပ်ရှားမှုသူ့ကိုကိုသင်တဦးတည်းဖြစ်၏နားလည်စေတော်မူမည်ကြောင်းထုတ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်.
တစ်ဦးအလုပ်ဖော်ပြချက်တက်ဖြည့်ရန်ရှိလျှင်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမဆန်းစစ်ခြင်း၏ခံစားချက် likes. သင့်ယောက်ျားသည်သိကျွမ်းဖို့အချိန်ကိုယူပါမယ့်အစားသူ့ကိုသူသည်ညာဘက်တစ်ဦးဖြစ်သည်သေချာစေရန်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုဖြတ်သန်းသွားအောင်. ချိန်းတွေ့တဲ့အခါမှာ, များစွာသောခေတ်သစ်အမျိုးသမီးများပင်သူတကယ်အဘယ်သူသည်သိရန်ဆိုတော့ရှေ့တော်၌လူထဲကသူတို့လိုချင်တဲ့အဘယ်အရာကိုထုတ်ဖေါ်ပြသ၏အလေ့အကျင့်ရှိသည်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hectic အသက်တာ၏ Is? ဖြစ်နိုင်စရာ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့လမ်းခရီး၌ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦးရပ်နေရှာတွေ့၏လူမှုရေးဖိအားများမသွားပါစေသင့်ပါသည်. သင့်ရဲ့ကောင်လေးသူလစ်လပ်နေသောတက်ဖြည့်စွက်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုထုတ်လွှင့်မည့်အစားသည်အဘယ်သို့များအတွက်အထူးခံစားမိစေ. ဒါဟာအကြီးမားဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်တယ်; မလျှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ကတိကဝတ်မှကြွလာသောအခါအကြီးမားဆုံးကြောက်လယောက်ျားရှိသည်. တစ်ဦးသောသူသည်သင်တို့အသည်းအသန်ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါသည်သိရန်တဲ့အခါ, သူလေယာဉ်ပျံယူမည်. ဆက်ဆံရေး၌သင်တို့၏အစောပိုင်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုအားလုံးတို့သည်လူကိုသိမှရတဲ့အကြောင်းဖြစ်သင့်. ဒါဟာသူ့ကိုလုံခြုံသည်ဟုခံစားရစေတယ်.
သင်ချက်ချင်းသူ့ပတ်လည်အားလုံးသင်၏အသက်တာအကူးအပြောင်းလျှင်သင့်ကောင်လေးဖိအားပေးခံရခံစားရပါလိမ့်မယ်မြင့်မားအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်. အမှုအရာသည်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပျက်, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာမေတ္တာအကြောင်းပြောဆိုချိန်တွင်ပင်. ထို့အပြင်, ကတိကဝတ်အတွင်းကနေလာရန်ရှိပြီးမည်သူမဆိုအပေါ်သို့အတင်းအဓမ္မမရနိုင်ပါ. သူ့ကိုမသိကျိုးကျွံပြုမပါဘဲ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်! သူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းဖို့အချိန် Make, သင်မူကား, အဖြစ်ကောင်းစွာမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများရှိသည်မေ့လျော့တော်မပါဘူး. သို့သော်ငြားလည်း, သူ့ကိုတိုင်းငါးမိနစ်ထားခဲ့ဖို့ခြိမ်းခြောက်မ. ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Be! သူ့ကိုရှိသည်ကံကောင်းသည်ဟုခံစားရစေပါသင်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတိကဝတ်၏ခံစားချက်ကိုငံ့မကြာမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်.
ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးသည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအဘို့သင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်သင်သူနှင့်အတူစုဆောင်းနေကြသည်အမှတ်တရများမပါဘဲမတည်မဆောက်နိုင်. သင်အချိန်ကိုရှာဖွေသေချာပါစေနှင့်သင်သူ့ကိုအံ့သြဖို့သင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့အမှတ်တရ၏ညာဘက်မျိုးကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်. သင်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တိုက်တွန်းတွန်းလှန်ပါ, သင်ကဘာသာရပ်ကျော်အစွဲအလန်းဘယ်လောက်နေပါစေ. ပျော်စရာနဲ့ကစားဖြစ်! သူနှင့်အတူဖြစ်ခြင်း likes တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်! အပြုသဘောအချိန်လေးဟာလူသားရဲ့နှလုံးဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း.